အကြောင်းအရာ – mCare
ကျွန်တော်တို့၏ Magellan ကုမ္ပဏီသည် Apple မှ အသိမှတ်ပြုထားသည့် အရောင်းဆိုင်ဖြစ်သော mDrive အမည်ဖြင့် (Apple Authorized Reseller) နှင့် mCare အမည်ဖြင့် (Apple Authorized Service Provider) များကို ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
mDrive သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး Apple အသိမှတ်ပြုအရောင်းဆိုင်အား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၌ Junction Mawtin တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် City Mall ၌ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် Apple ၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး သိရှိလိုခြင်း (သို့မဟုတ်) လေ့လာလိုပါက လာရောက် လေ့လာနိုင်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါသည်။
mCare သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် Apple မှအသိမှတ်ပြုထားသည့် Apple Service Provider ဖြစ်ပြီး Junction Square (ပြည်လမ်း) တွင်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ mCare တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် Service Technician များမှာ Apple မှ အထူးသင်တန်းပို့ချပေး၍ အောင်မြင်ပြီးထားသော Apple ၏ အသိမှတ်ပြု လက်မှတ်ရထားသူများဖြစ်ပြီး Apple မှတိုက်ရိုက်တင်သွင်းထားသော (Spare Parts) အစိတ်အပိုင်းများဖြင့်သာ အသုံးပြု၍ လူကြီးမင်းတို့၏ Apple Device များအား ကျွမ်းကျင်စွာ ပြုပြင်ပေးနေပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့အတွက် Apple ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် သင်ကြားပေးခြင်း၊ လူကြီးမင်း အသုံးပြုနေချိန် ကာလအတွင်း ကြုံတွေ့ နေရသည့် အခက်ခဲများကို ရှင်းပြပေးခြင်း၊ Apple ထုတ်ကုန်အား စတင် အသုံးပြုမည့် လူကြီးမင်းများအတွက် ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် training နှင့် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကိုပါ သင်ကြားပေးနေသည့် ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သောကြောင့် Apple Products အသုံးပြုနေသည့် Apple User ထု တစ်ရပ်လုံးအား လေးစားစွာ အထူးဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
© 2021 mCare. All Rights Reserved. iCareAsisa.com